IWidget esecaleni yeWordPress kunye neKhowudi emfutshane yokudlala iiPodcasts | Martech Zone
Ukuba ukhe wasebenzisa okungagqibekanga uShishino iwijethi yeWordPress kwaye yangena Ukutya kwePodcast RSSUya kuqaphela ukuba ibonisa kuphela isihloko kunye nenkcazo. Kungenxa yokuba umgangatho we-iTunes wokutya kwe-podcast wongeza iithegi ezongezelelweyo zomfanekiso onxulumene nepodcast kunye nendawo yefayile yePodcast uqobo.
Ngaphandle kweWordPress enesidlali sayo sokumamela, ezi zimbini azisebenzi kunye… kude kube ngoku! Kwakundidandathekisile ukuba andizukwazi ukuba nabantu badlale iipodcast zam zakutshanje kwicala lam elisecaleni ngenxa yoko ndakhe ndangenisa iPlagi yeWordPress ukwenza oku. Abantu kwiWordPress bayivumile iplagi, yapapashwa kwindawo yokugcina izinto, kwaye ngoku isebenza ngaphezulu kweendawo ezingama-200 zeWordPress.
Khuphela iWindowsPress Podcast Player Player Widget kunye neKhowudi emfutshane yePlagi
Ewe unokukhangela iplagin ngephepha lePlagi kwaye uyifake ukusuka apho.
Ukutya kwePodcast yebar esecaleni
Yiplagi elula efileyo ekuvumela ukuba ungenise iTayitile yecandelo lebar esecaleni, faka iPodcast feed yakho, usete umda wokuba zingaphi iipodcast onqwenela ukuzibonisa, kunye nokuseta ubungakanani bomfanekiso kwiPodcast (ubukhulu be 0 uya kuwufihla umfanekiso). Isidlali somsindo esingagqibekanga seWordPress sisetyenziswa kusetyenziswa umsebenzi we-API, wp_audio_shortcode.
Ukongeza, iwijethi iya kupapasha i icon yokondla. Unokukhetha ngokongeza ii-iTunes zakho, uGoogle Play, kunye nee icon zeScoudcloud zeendwendwe ezinokucofa kuzo. Ungayibona isebenza kwibar yecala!
Ukondla iPodcast indlela emfutshane
Abasebenzisi abambalwa banxibelelane kwaye babuza ukuba ndingongeza na ikhowudi emfutshane ukuze bakwazi ukufaka iPodcast feed kunye neWindowsPress Audio Player ngqo kwiphepha okanye ngeposi, ndiye ndayihlaziya iplagi!
Ukusetyenziswa kweKhowudi emfutshane:
[podcastfeed feedurl = "" quantity = "" imgsize = "" imgclass = "" itunes = "" google = "" soundcloud = "" icons = ""] Nazi iipodcast zethu zamva nje. [/ podcastfeed]
isondlo -Idilesi yakho yokondla ipodcast.
ubuninzi -Ubungakanani beepodcast onqwenela ukubonisa.
imgsize Ubungakanani bomfanekiso ongathanda ukuwubonisa, 0 ngaphandle komfanekiso.
imgclass -Iklasi yomfanekiso, okungagqibekanga kulungelelaniswe ngasekhohlo
Itunes -Idilesi yakho yeTunes ukubonisa kwiimpawu.
uphando -Idilesi yakho kaGoogle Dlala ungathanda ukuyibonisa kwii icon.
soundcloud -Idilesi yakho ye-SoundCloud ungathanda ukuyibonisa kwii icon.
icons Nokuba ufuna ukubonisa ii-icon, okungagqibekanga kuyinyani.
Nceda unike iplagi yovavanyo kunye nokujonga kwakhona ukuba uyayithanda!
tags: umdlaliipodcast yokondla ikhowudi emfutshaneipidcast yesondlo sewijethiUmdlali wepodcastiwijethi yomdlali wepodcastipodcast rss feedIwijethi ye-podcast rssIkhowudi emfutshane yePodcastshortcodesiwijethi esecaleniwidget
Lungisa: Imilinganiselo yeNtengiso yeNkqubo yokuSebenza kunye neQonga lokuThintela ubuQhetseba